I-Hydroxy progesterone powroate powder (630-56-8) hplc =98% | AASraw
I-Hydroxyprogesterone powroate powder
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / I-Hydroxyprogesterone powroate powder
SKU: 630-56-8. Udidi: AmaHormones aseTyhini
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-mass order ye-Hydroxyprogesterone powroate powder (630-56-8), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Hydroxyprogesterone powroate powder i-hormone ye-synthetic steroid efana ne-medroxyprogesterone acetate kunye ne-megestrol acetate. I-ester derivative ye-17α-hydroxyprogesterone eyenziwe kwi-caproic acid (i-hexanoic acid). I-Hyroxyprogesterone caproate yayithengiswa ngaphambili phantsi kwegama le-brand MAKENA.
Ividiyo ye-Hydroxyprogesterone caproate powder
I-Hydroxyprogesterone powroate powder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-Hydroxyprogesterone powroate powder
I-molecular Formula: C27H40O4
Isisindo somzimba: 428.6
Amagama eKhemikhali: I-Hydroxyprogesterone caproate powder
Amagama ebumba: I-powder Hydroxy progesterone (OHPC), i-Delalutin powder, i-proluton powder, i-630-56-8
I-Hydroxyprogesterone i-caproate powder Usetyenziso
LE NKCUKACHA YONYELWA NGEMIBUZO EZIQHELEKILEYO KUNYE KUNYE IYAFUNEKA YISEBENZISWE NJENGOMSEBENZI WOKWENZA OKANYE OKUNYE OKUNYE UKUQHUBA KWEMPILO.
I-1) Ukulungiselela ukuhanjiswa kwangaphambili kwezilwanyana kumabhinqa kunye nokukhulelwa kwe-singleton enembali ye-singleton yokuzalwa kwangaphambili.
Abadala kunye nabantwana abakhulelweyo abakhulelweyo be-16 iminyaka nangaphezulu
250 mg (1 mL) IM kanye ngeveki nganye (iintsuku ze-7 zonke). Qala unyango nanini na phakathi kwee-16 iiveki kunye neentsuku ze-0 zokukhulelwa ukuya kwii-20 iiveki kunye neentsuku ze-6 zokukhulelwa. Qhubeka kanye ngeveki ukuya kwiveki ye-37 (ngeeveki ze-36, iintsuku ze-6) zesigxina okanye ukuhanjiswa, nantoni na kuqala. Ukusebenza kwe-hydroxyprogesterone kusekelwe ekuphuculeni kwinani labasetyhini abanikezela ngaphantsi kwamaviki e-37. Akukho zilingo ezilawulwayo ezibonisa inzuzo echanekileyo yekliniki, njengokuphucula ukufa kwe-neonatal nokuxhatshazwa. UKUSETYENZISWA KWEENKONZO: I-hydroxyprogesterone ayijolise ukuba isetyenziswe kwabasetyhini abanamaqela amaninzi okanye ezinye izinto ezinobungozi bokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa.
Imilinganiselo engaphantsi (Makena auto-injection kuphela)
275 mg (1.1 mL) ngaphantsi kweyonto nganye (nganye imihla ye-7). Qala unyango nanini na phakathi kwee-16 iiveki kunye neentsuku ze-0 zokukhulelwa ukuya kwii-20 iiveki kunye neentsuku ze-6 zokukhulelwa. Qhubeka kanye ngeveki ukuya kwiveki ye-37 (ngeeveki ze-36, iintsuku ze-6) zesigxina okanye ukuhanjiswa, nantoni na kuqala. Ukusebenza kwe-hydroxyprogesterone kusekelwe ekuphuculeni kwinani labasetyhini abanikezela ngaphantsi kwamaviki e-37. Akukho zilingo ezilawulwayo ezibonisa inzuzo echanekileyo yekliniki, njengokuphucula ukufa kwe-neonatal nokuxhatshazwa. UKUSETYENZISWA KWEENKONZO: I-hydroxyprogesterone ayijolise ukuba isetyenziswe kwabasetyhini abanamaqela amaninzi okanye ezinye izinto ezinobungozi bokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa.
I-2) Ukunyanga kokungasebenzi, umdlavuza we-endometrial.
1,000 mg okanye ngaphezulu ngeveki IM (udidi lwe-1 gram IM kanye ngeveki kwi-1 gram IM kanye ngosuku). Yeka xa kubuyela kwakhona, okanye emva kweeveki ze-12 kungekho mpendulo. Ngamanye angasetyenziselwa kwisigaba esiphezulu ngokunyanga kunye nezinye i-antiticancer therapy (ukuhlinzwa, i-radiation, okanye i-chemotherapy, okanye ukuhlanganiswa kwezi zinto). Iziphumo zonyango ezibhekiselwe kumhla zilunge ngakumbi kwiindlela ezahlukileyo ezahlukileyo ze-endometrial adenocarcinoma.
I-3) Ukunyanga kwe-amenorrhea (yokuqala okanye eyesiqhekeza) okanye ngenxa yokuphuma kwe-uterine ngenxa yokungalingani kwe-hormonal ngokungabikho kwemfuyo ye-organic.
Abadala kunye nabasetyhini abaselula
I-375 mg IM njengomlinganiselo owodwa, unikezelwa nanini na. Umthamo olandelayo ungase uqale emva kweentsuku ze-4 zokugqithiswa okanye, xa kungekho kuphuma, iintsuku ze-21 emva kwesazi esisodwa sokuqala. Ukuba akukho mpendulo emva kwemijikelezo ye-4, yeka. Inani lezijikelezo ezisetyenzisiweyo kunye nokuba kusetyenziswe ukulandelelana kwe-cyclic kuxhomekeke kubonakaliso bokusetyenziswa nokuba ngaba isrogen yonyango isetyenziswa ngokufanayo. Umjikelo ojikelezayo we-cyrolic ne-estrogen ngolu hlobo lulandelayo (umjikelezo wemihla ye-28; uphindaphindiwe rhoqo kwiiveki ze-4) Usuku lwe-1 ngamnye kumjikelezo ngamnye: I-Estradiol Valerate Injection (20 mg IM); ngoko, iiveki ze-2 emva koSuku 1: I-Hydroxyprogesterone powroate powder 250 mg IM; I-Estradiol Valerate (i-5 mg IM) Iiveki ze-4 emva koSuku lwe-1: Lo ngumhla we-1 womjikelezo olandelayo. Phinda kwakhona njengoko kubonisiwe. Ukuba ukungafumaneki kwe-estrogen kuye kwandiswa kwiigulane ezine-amenorrhea, ukuya esikhathini kungenakwenzeka kude kube yi-estrogen enyanga eziliqela. Yeka xa unyango lwe-cyclic lungafunwa.
Ukuvavanya ukuveliswa kwe-estrogen engapheliyo ("I-D neC").
250 mg IM kanye; phinda uqinisekiswe kwiiveki ze-4 emva kwejoyi yokuqala. Yeka emva kwesazi yesibini. Ukuhlamba kufuneka kwenzeke kwi-7 kwiintsuku ze-14 emva kwejoza.
Isexwayiso kwi-Hydroxyprogesterone powroate powder
Inkunkuma ye-hydroxyprogesterone yesikhumba se-hydroxyprogesterone, kubandakanywa iimveliso eziqingqiweyo, ukuhlangabezana nencazelo yeemfuno zonyango xa zisetyenziselwa ukunciphisa umngcipheko wokuzalwa kwangaphambi kwilungu lomfazi kwaye ZONKE ezi zilandelayo zilandelwa:
1. Ilungu linokukhulelwa kwangoku.
2. Ilungu linomxholo ogqityiweyo wangaphambili wokuzalwa wokuzalwa kwangaphambili owenziwe ngaphantsi kweeyunithi ezingama-37 ukunyuka kwexesha ngenxa yokusebenza kwangaphambili komsebenzi okanye ukugqithwa kwangaphambili kweembrane.
3. ILungu alizange libe naluphi na umsebenzi wokuqala okanye ukukhulelwa kwangaphambili kweembrane ngexesha lokukhulelwa kwangoku.
4. Unyango luqaliswe phakathi kweeveki ze-16, iintsuku ze-0 kunye nee-20 iiveki, iintsuku ze-6 zesigxina.
5. Amagciwane awafanele alawulwe kaninzi ngaphezu kweveki ukuya kwii-36 iiveki zokuxhaswa okanye ixesha lokunikezelwa (nantoni na kuqala) ngokubakho ubuninzi bee-injini ze-21.
6. I-Dose ayidluli i-250 mg ngomjovo.
Igama leekhemikhali ye-Hydroxyprogesterone powroate powder ikhulelwa-4-ene-3,20-dione, 17 [(1oxohexyl) oxy). Inomlinganiselo wobumbano weC27H40O4 kunye nesisindo se-428.60. I-Hydroxy progesterone powroate powder ikhona emhlophe kumakristal ezimhlophe okanye i powder kunye ne-120 ° -124 ° C.
Indlela yokwenza i-hydroxy progesterone ye-powroate powder yokusebenza: indlela eyenziwa ngayo iprogesterone ekuvimbeleni ukuzalwa kwangaphambi kokuzalwa, ayiqondwa kakuhle, kodwa ininzi indlela echaphazeleka ngayo. I-progesterone ibambe iqhaza elibalulekileyo ekulawuleni inkqubo yokuzala yesibini kwaye ibalulekile ekufakweni ngokuphumelelayo kwimbungu kunye nokugcinwa yokukhulelwa. Isebenza ngokubophelela kwi-progesterone receptors kwi-uterus, ama-ovari, amabele kunye nenkqubo ye-nervous central. Ezi zamukeli zikhoyo kwi-2 isoforms, i-PR-A kunye ne-PR-B. Iprogesterone ebophayo kula ma-receptors ekugqibeleni ikhokelela ekulawuleni umthamo wokuguqulwa komzimba. Ezi ziphumo kwisiphumo esichasayo esichaphazelayo esichaphazela isimo esinobuqhetseba esenzekayo ngokuqaliswa kwabasebenzi, kwaye sigcine i-uterine ineiscence ngokuzinzisa i-progesterone esebenza kwi-myometrium.
I-Pharmacodynamics ye-Hydroxyprogesterone powroate powder: Akukho zifundo ezithile ze-pharmacodynamic ezenzelwe ukuvavanya i-Hydroxyprogesterone i-caproate powder injections. Nangona kunjalo, indlela yokusebenza inxulumene nokunyuka komsebenzi phakathi kweprogesterone kunye ne-progesterone receptors.
I-Hydroxy progesterone i-powroate powroate ubomi besiqingatha ubomi iintsuku ze-16 (± 6 iintsuku).
I-Hydroxyprogesterone powroate powder I-powder Raw
I-Hydroxy progesterone i-caproate powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Hydroxyprogesterone powroate powder evela kwi-AASraw
I-17-Hydroxyprogesterone powroate powder
Delmadinone i-Acetate powder
Uchungechunge lwe-anesthesia yezokwelapha (1)
03 / 03 / 2020 UDkt Patrick Young
03 / 02 / 2020 UDkt Patrick Young